Anyị na-ahọrọ ụdị akwụkwọ nri kacha mma
Akwụkwọ nri bụ mkpụrụ osisi a na-enwe kwa afọ nke ezinụlọ Amaranth, nakwa na ọkwa nká bụ Mare osisi. Site na ncha mkpụrụ nwere ike iru mita 35 ruo 40. Na July, okooko osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ malitere ịmalite na osisi, bụ nke na-agbanwe oge na-abanye mkpụrụ osisi oval yiri mkpụrụ.
Ụzọ maka owuwe ihe ubi maka oyi
Ndị ọkachamara n'ihe oriri na-edozi ahụ na-akwado na ịkụnye akwụkwọ nri na nri gị dịka ụzọ isi chekwaa ndị ntorobịa ma na-akwalite ahụ ike. Osisi bụ nanị ụlọ ahịa bara uru nke na-enyere ahụ aka ịrụ 100%. Otú ọ dị, ọ bụrụ na n'oge okpomọkụ, ọ bụghị nsogbu ịchọta akwa akwụkwọ nri, mgbe ahụ n'oge oyi, akwụkwọ ọhụrụ ya bụ ụkọ.
Akwụkwọ nri Strawberry na atụmatụ ya na-eto eto
Nke a bụ ihe na-akpali mmasị ma, nke kachasị mkpa, osisi bara uru. Aha akwukwo sayensi ya bu onye di na nwunye, onye a huru otutu, ma a na-akpokwa ya mkpuru akwukwo ocha. N'otu oge ahụ ọ dị ka akwụkwọ nri, strawberry na utu. Ihe a na-ewu ewu nke osisi ahụ aghọwo ihe dị mma na ọdịmma dị ukwuu n'ahụ ahụ mmadụ.